‘हर्के हवल्दार’ पाराले हटाइयो, १-२-३ गरेर गल्ती देखाइदिनुपर्‍यो : एसपी विष्ट [अन्तर्वार्ता]
२o७५ कार्तिक ९ शुक्रबार| प्रकाशित १६:o३:o८
काठमाडौं- कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या अनुसन्धानमा गम्भीर लापरबाही गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले बिहीबार कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्टलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाएको छ। बालिका हराएदेखि नै प्रहरीले लापरबाही गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। गृह मन्त्रालयले निलम्बन गर्दै अन्ततः यी दुई प्रहरी अधिकृतलाई सेवाबाट हटाएको छ। विष्टलाई लागेको आरोप र अब उनले के गर्छन् भन्नेबारे नेपाल लाइभका सहकर्मी नारायण अधिकारीले एसपी विष्टसँग कुराकानी गरेका छन्।
गृह मन्त्रालयले तपाईलाई सेवाबाट हटाएको पत्र पाउनुभयो?
यसमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ?
जुन आरोप लगाएर मलाई हटाइएको छ, त्यसमा म सन्तुष्ट छैन। ती आरोपमा कुनै प्रमाण छैनन्।आरोपको मैल जवाफ पनि दिइसकेको छु। कान्तिपुर टिभीमा आउने हर्के हबल्दार पाराले अनुसन्धान गरेर मलाई सेवाबाट हटाइएको छ। यसमा मेरा आपत्ति छ। घटनालाई सिरियस्ली बुझ्ने काम भएन।
अब के गर्नु हुन्छ?
कानूनी उपचारमा जान्छु। अहिले त्यही प्रोसेसमा छु। पहिला नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेछ। त्यहाँ पुनरावेदन गर्छु। त्यसबाट पार नलागेपछि अदालत जाने बाटो छँदैछ। अदालत जान्छु।
निलम्बन परेदेखि अहिलेसम्मको तपाईको दैनिकी कस्तो रह्यो?
बिहान ८ बजे नै हेडक्वाटर पुग्नुपर्दथ्यो। पछि एकेडेमी जान थालियो। बेलुका ७/८ बजे फर्किइन्थ्यो। कसैलाई भेट्ने समय पनि हुँदैन थियो। दिनभरी हेडक्वाटर र एकेडेमीमा बस्नुपर्ने थियो। एउटा राष्ट्रसेवकलाई यताबाट पनि हैरानी, उताबाट पनि हैरानी थियो। निलम्बनमा परेको दिनदेखि नै मैले कष्टकर जीवन बिताउँदै आएको छु।
प्रहरीको इतिहासमा मेरा लागि यो कहिल्यै नबिर्सिने क्षण भयो। न मेरो काठमाडौंमा घर छ, न कोही छ। न कँही बस्ने ठाउँ छ। गेष्ट हाउसमा बसेको तीन महिना भइसक्यो। एउटा सादा जीवन बिताइरहेको व्यक्तिलाई काठमाडौंको महल बसेर कञ्चनपुरको कुना काप्चा थाहा पाउने तपाईहरुले खोज्नु परो अब यर्थाथ के हो?
सेवाबाट हटाउनुको कारण पत्रमा पक्कै लेखेको होला। के रहेछ हटाउनुको कारण चाँहि?
तीन/चार वटा कारण उल्लेख गरिएको छ। खोजतलास तथा अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको, बलात्कार तथा हत्याका प्रमाण नष्ट गरेको, बालिका पन्तको गुप्ताङ्ग पखालेको, नेपालमै नरहेको बाबुको दस्तखत गराएको, अन्त्येष्टि गर्न पीडितलाई दबाब दिएको र अत्याधिक बल प्रयोग गरी गोली चल्ने वातावरण बनाएको भन्ने उल्लेख छ।
तपाईलाई लागेका यी आरोपका उत्तर छन् तपाईसँग?
उत्तर किन नहुन नि? एक/एक उत्तर मसँग छन्। केही आरोप मसँग सम्बन्धित समेत छैनन्। पहिलो कुरा अनुसन्धामा लापरबाही गरेको प्रमाण नष्ट गरेको भन्ने छ। जानी/नजानी गल्ती पक्कै भएको छ। मैले घटनास्थलमा प्रहरी टोली पठाएको हुँ। तर मैले प्रमाण नष्ट गर्नु भनेर टोली पठाएको हो र? घटनास्थलमा गएको कुनै अफिसर त्यस्तो भनेका छन् र?
त्यत्रो घटना हुँदा तपाई आफै चाहिँ किन घटनास्थल जानु भएन नि?
एक जना डिएसपी, २ जना इन्स्पेक्टर, ४ जना सई, अनुसन्धान टोली, सोको टिम एउटा घटनास्थलमा खटिनु भनेको सानो टिम हो? त्यो सबै जिल्लाको टोली नै गएको होइन र? म मात्रै पो गइन त, म भन्दा तलका त सबै गए। एउटा घटनामा यत्रो टिम खटिनु भनेको सानो कुरा होइन।
लास नबुझे यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर दबाब दिएर जलाउन लगाइयो भन्ने आरोप पनि छ नि!
यसमा एक रत्ति पनि सत्यता छैन। दबाब दिने भए ४ दिन किन कुराएर किन राख्थ्यौं? त्यसै दिन जलाउन लगाउँथ्यौं नि! जिल्ला प्रशासनमा लिखित सहमति भएपछि लास जलाएको हो ७ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य माननीय प्रकाश रावलको उपस्थितिमा जिल्ला सुरक्षा समितिका सबै पदाधिकारी र पीडितका आफन्तहरुबीच १३ गते बेलुका लिखित सहमति भएपछि मात्रै १४ गते दाहसंस्कार गरिएको हो। लिखित सहमतिअनुसार नै दाहसंस्कार भएको हो। तीन दिनसम्म छलफल गरेर दाहसंस्कार गर्दा पनि दबाब हुन्छ र?
अनि नेपालमै नभएको मान्छेको दस्तखत चाहिँ कसरी गराउनु भयो नि?
घटनास्थलमा साइकल र कापी फेला परेको थियो। त्यो निर्मलाकै हो भनेर १० गते सनाखत भयो। सनाखतमा आमा र बाबु दुबैको नाम राखिएको थियो। आमाले दस्तखत गरिन्। बाबुको दस्तखत गर्ने बेला उनी भारतमा भएको थाहा भयो।
१२ गते निर्मलाको बुबा आएपछि दस्तखत गरिएको हो। अघिल्लो दिन अरुले दस्तखत गरेकाले अघिल्लै दिनको मिति राखिएको थियो। भोलिपल्ट निर्मलाका बुबा अाएपछि दस्तखत गराइएको थियो।भएको सत्य कुरा यही हो। यिनै सानातिना टेक्निकल त्रुटीलाई टेकेर ठूलो इस्यु बनाइयो। आखिर दस्तखत कीर्ते होइन, सम्बन्धित मान्छेकै हो।
हत्यापछिको अनुसन्धानमा लापरबाही भयो भन्ने पनि छ नि?
हामीले मान्छे शंकास्पद मान्छे समात्दै, ल्याउँदै, बुझ्दै, छोड्दै अनुसन्धान गरिरहेकै थियौं। अनुसन्धान प्रगति उन्मुख पनि थियो। हामी दाबाका साथ भन्थ्यौं कि हामी यो अनुसन्धान पूरा रुपमा हामीलाई गर्न दिएको भए हत्यारा पत्ता लगाएरै छाड्थ्यौं। मेरो लापरबाही कहाँनेर भयो? १, २, ३ गरेर देखाउनु परो नि! त्यसै आरोप मात्रै लगाएर हुन्छ?
एउटा अनुसन्धान अधिकृत खटाएको बाहेक मैल त्यो घटनामा प्रत्यक्ष के लापरबाही गरेको छु? मैले अनुसन्धानका लागि टिम खटाउँदै लापरबाही हुने हो र? कि मैले लापरबाही गर्नु भनेर पठाएको छु भने कुनै प्रहरीले भन्न सक्नु परो।
हामी असक्षम भयौं ठीक छ, नालायक भयौं त्यो पनि ठीक छ। तर परिणाम खै त? देखाउनु परो नि! हामी अझै सहयोग गछौं। गरिरहेकै छौं। हामीले छाडेपछि पनि धेरै अनुसन्धान समिति गठन भए। खोई प्रगति विवरण? खोई परिणाम?
आन्दोलनमा बल प्रयोग त गरेकै हो नि तपाईले, होइन र?
साउन १ गते नगरपालिकाले कर बढाउने निर्णय गरेको थियो। २ गतेदेखि त्यसको विरोधमा नाराजुलुस भयो। नगरपालिका विरुद्ध ठूलो नाराबाजी भयो, जुलुस भयो। नागरिकको सुरक्षा र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु प्रहरीको दायित्व हो। डा. गोविन्द केसीको पक्षमा पनि त्यतिबेलै आन्दोलन भएको थियो। आन्दोलनले उग्र रुप लिएपछि राज्यको उपस्थित देखाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीमा थियो।
सिठी फुकेको भरमा, सामान्य लाठी चार्ज गरेको भरमा त्यो सबै अान्दोलन प्रहरीले सफलतापूर्वक नियन्त्रण गर्न सक्यो। त्यतिबेलासम्म 'प्रहरी मेरो साथी' थियो। त्यसपछि प्रहरीविरुद्ध नै आन्दोलनकारी खनिन थाले। आन्दोलनमा सामान्य हस्तक्षेप त भएकै हो।
डेढ महिनासम्म मैले आन्दोलन थेगेको हुँ, मात्रै लाठी चार्ज र सिठी फुकेर। म हिँडेको दोस्रो दिन किन गोली चल्यो? किन मान्छ मर्यो? अनि मलाई आन्दोलनमा दमन गरो भन्ने? सरकारले गल्ती गर्यो, प्रहरी संगठनले गल्ती गर्‍यो भन्ने होइन। सुझबुझले काम गरिदिनु परो भन्ने मेरा आग्रह हो। भीडको कुरा र अनुसन्धानका कुरा मेल खान्छन् भन्ने हुँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु परो। हर्के हबल्दार पाराले काम गर्नु भएन भन्ने हो।